श्रीमानले तँ, तिमी भन्न हुने, श्रीमतीले किन नहुने ? - Jananigrani News
प्रकाशित मितिः ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १८:०३
लेखकः पवित्रा घिमिरे
‘हेर फलानीले त उसको लोग्नेलाई कस्तो हेप्दी रहिछ है ? कसरी तिमी भन्न सकेको होला ? राम राम, ढिस्कानीले त झन् सोझै तँ पो भन्दिरहिछ ? कस्तो मति नभएको ?
आधुनिक भनिने महिलाहरुकै मुखबाट पनि हामी यस्ता कुराहरु सुन्ने गर्छौं । श्रीमानलाई तिमी वा तँ भन्ने महिलाहरु गतिछाडा हुन् भन्ने खालको सोचाई उनीहरुमा पाइन्छ । जबकि पुरुषले भने आफ्नो श्रीमतीलाई तँ, तिमी नै भनिरका हुन्छन् । त्यसमा कुनै प्रश्न उठ्दैन । कुनै प्रतिवाद र आलोचना गरिँदैन । महिलाहरुले नै यसलाई सहर्ष स्वीकार्छन् ।